कार्कीको घरमा रहेका विजयले तलब पाएका थिए वा थिएनन् ? यस्तो छ वास्तविकता « Deshko News
कार्कीको घरमा रहेका विजयले तलब पाएका थिए वा थिएनन् ? यस्तो छ वास्तविकता
काठमाडौं, माघ, २९
पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको श्रीमती मुना कार्कीको हत्या गरेर आत्महत्या गरेको भनिएका विजय चौधरी दाङ लमहीका हुन् । विजयको गाउ“मा सन्नाटा छ, छोराको शव बुझ्न ५० वर्षीय बाबु मंगलबार बिहानै काठमाडौं हिँडेका छन् भने ४५ वर्षीया बिरामी आमालाई घटनाबारे जानकारी नै छैन ।
पूर्वसचिव कार्की दाङको लमहीस्थित प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाको कार्यालय प्रमुख भएकाले विजय काठमाडौं आउने संयोग जुरेको हो । कार्कीले पहिले लममहीका आसिवन चौधरीलाई घरेलु कामदार बनाएर काठमाडौं ल्याएका थिए । ६ वर्षअघि कार्की नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख बनेको वेला आसिवनलाई प्राधिकरणको लमहीस्थित शाखामा जागिर लगाइदिए  । आसिवनले पनगुन तिर्न विजय चौधरीलाई कार्कीको घरमा घरेलु कामदार बनाइदिएका हुन् ।
लमही–२ का वडासचिवसमेत रहेका स्थानीय रामभजन चौधरीले पनि गाउँमा छँदा विजय शान्त स्वभावको भएको बताए । ‘म पनि छिमेकी नै हुँ। उसले कहिल्यै झगडा गरेको थाहा पाइएन । तर, त्यति ठूलो घटना गरायो भन्ने सुन्दा पत्याउन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने । विजयका २० र १८ वर्षका दुई भाइ छन् । नयाँ पत्रिका दैनिक